မေမေတို့ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သမီးလေးတွေကို Menstruation အကြောင်း ဘယ်လိုပြောပြမလဲ? - Chit MayMay
Home adolescence မေမေတို့ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သမီးလေးတွေကို Menstruation အကြောင်း ဘယ်လိုပြောပြမလဲ?
မေမေတို့ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သမီးလေးတွေကို Menstruation အကြောင်း ဘယ်လိုပြောပြမလဲ?
လူအများစုက ကိုယ့်ရဲ့သမီးမိန်းကလေးတွေကို (Menstruation) ရာသီလာခြင်းအကြောင်း ပြောပြတဲ့အခါ ရှက်ရွံ့မှုကို အတော်အသင့်ခံစားရပါတယ်၊ သို့သော် ဒီလိုပြုလုပ်ရာမှာ အချို့သော ပြဿနာတွေကို ကျွန်မတို့ ကိုင်တွယ်ပုံက ကျွန်မတို့ကလေးတွေရဲ့ အမြင်နဲ့ တွေ့ကြုံခံစားမှုအပေါ် သက်ရောက်နိုင်တာကို သူတို့ သတိမထားမိကြပါဘူး။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သင်ဟာ မိခင် (သို့)ဖခင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် Menstruation အကြောင်း စကားပြောတဲ့အခါ အဆင်မပြေမှုခံစားရလျှင် သူမသည်လည်း အဆင်မပြေမှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သို့သော် အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းအကြောင်းကို ပိုမိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေ့အကြုံဖြစ်စေဖို့ menstruation နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးဘဝတည်းက ပြဿနာတွေကို ပိုပြီး သဘာဝကျကျ ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် information ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ရာသီလာခြင်းအကြောင်း မေမေတို့သမီးလေးကို ဘယ်လိုပြောမလဲ?
ရာသီလာခြင်းက အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ ဘဝနဲ့ ကျန်းမာရေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သမီးဖြစ်သူဟာ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြဖို့ ၊ မေးခွန်းတွေမေးဖို့နဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို ဖော်ပြဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေသာ periods ရှိပေမယ့်လည်း အမျိုးသမီးတွေသာ ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရာသီလာခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အခါ ဖခင်တွေဟာလည်း သမီးဖြစ်သူကို ပညာပေးခြင်းမှာ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် သမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ periods နှင့်ပတ်သတ်ပြီး တခြားအမျိုးသမီးတွေနှင့်သာ ပြောနိုင်တယ်လို့ ခံစားရလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ရာသီစက်ဝန်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုအဆင့်ပေါ်မှာ အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ထူးခြားနဲ့နည်းလမ်းနဲ့ လူတစ်ဦးချင်း်စီပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။
“ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ”
ရာသီလာခြင်းက အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အဓိက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ တွဲလာပါတယ်။ မိန်းကလေးဖြစ်ခြင်းကနေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ရာသီစက်ဝန်းက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်၊။ သူမရဲံဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုနဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲတွေကြောင့် အနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးနေနိုင်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အခြားသူတွေ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အခါ အထူးသဖြင့် sensitive ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ပုံသဏ္ဍာန်သစ်နှင့်အတူ သက်တောင့်သက်သာ ခံစားရဖို့ အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ ၊ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ကိုင်တွယ်တတ်အောင် သင်ယူလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ self-esteem ကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့ အဓိကကျပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အခြားသူတွေပေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သမီးဖြစ်သူရဲ့ ဒေါသ (သို့) ဝမ်းနည်းမှုတွေကို လျစ်လျူမရှုပါနဲ့။
“သမီးလေးတွေအတွက် menstruation နှင့်ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်”
မေမေတို့သမီးလေးမှာ menstruation နှင့်ပတ်သတ်တဲ့ မေးခွန်းများစွာ ရှိနေမှာ သေချာပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သံသယတွေ၊ စိုးရိမ်မှုတွေကို လွင့်ပြယ်စေဖို့ အောက်ပါအချက်အလက်တွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်သာ လာသင့်သော်လည်း ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ရဲ့ first cycles က အနည်းငယ်ပုံမှန်မဟုတ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဟာ ၂၈ရက်တာကာလအတွင်း ၃ရက်မှ ၆ရက်အကြား ရာသီလာပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက တစ်ပတ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ cycle က ၂၁ရက်ထက်နည်းလျှင် (သို့) ၃၅ရက်ထက်ကျော်ရင် မီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
၂။ track လုပ်ခြင်း
ရာသီစက်ဝန်းကို ခြေရာခံဖို့ အရေးကြီးကြောင်း သမီးဖြစ်သူကို မကြာခဏပြောပေးရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ရာသီစက်ဝန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာ မှတ်တမ်းတင်လို့ရမယ့် စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-Xiaomi ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Health app ဆိုပြီး ထည့်ပေးထားပါတယ်။
၃။ Product များ
Tampons နဲ့ pads ကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ Period အတွင်း တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပတ်သတ်လာတဲ့အခါ လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးသန့်ရှင်းချင်တယ်၊ ချွေတာချင်တယ်၊ ဂေဟစနစ်နဲ့လည်းကိုက်ညီချင်တယ်ဆိုရင် menstrual cups (သို့) cloth pads လေးတွေ အစားထိုးစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးအများစုက ရာသီလာတဲ့အခါ နာကျင်မှုခံစားကြရပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူကို ရာသီလာခြင်းနဲ့ သူမရဲ့ cycle အတွင်း အဆင်မပြေမှု ဖြစ်နိုင်ခြေများအကြောင်းကို ပြောပြပါ။
Previous articleကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အရေပြားမည်းလာခြင်းကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ?
Next articleသင်ဟာ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သောအလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက်
မိဘတွေနဲ့ အရွယ်ရောက်ကလေးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုကောင်းမွန်စေမယ့် နည်းလမ်း (၅)ချက်